Signal vs Telegram: kedu ndịiche dị? | Nzukọ mkpanaka
Signal vs Telegram: kedu ihe dị iche?
Ị nwere ike na -egbu oge mgbe ị na -ahọrọ ngwa ozi ngwa ngwa yana na ị kpebiri ịhapụ WhatsApp pụọ, ọgụ ahụ ka ga -adị n'ime Ihe ngosi vs Telegram, n'ụzọ bụ isi. Ọ bụ ya mere anyị ga -eji ewetara gị akụkọ ebe anyị ga -eji atụnyere ngwa ozi abụọ ngwa ngwa. O yikarịrị ka ị chọpụtala na WhatsApp nwere ọtụtụ nsogbu nzuzo na ọ bụ ya mere ị na -achọ ihe ọzọ ị ga -eme nke ọma ma ọ bụrụ na ihe ị na -achọ bụ nke ahụ.
Esemokwu dị n’etiti WhatsApp, Telegram, Signal, Messenger na Apple Ozi
Ọrụ ozi ngwa ngwa abụọ nwere nchekwa karịa ngwa Mark Zuckerberg, onye nwe Facebook onye nwekwa WhatsApp. N'ezie, n'ọnwa Jenụwarị nke afọ a, WhatsApp mere ka a mara na ọtụtụ, ma ọ bụrụ na ọ bụghị ha niile, kesara data onye ọrụ na ruo ugbu a ka e debere ya na ụlọ ọrụ nwanne ya nwanyị, Facebook. Nke a kpalitere nkatọ dị ukwuu maka ụlọ ọrụ ahụ. N'ihi nke a, ndị ọrụ niile malitere ịchọ ụzọ ọzọ, ya mere ntụnyere a, ebe ngwa abụọ nọ n'ọnọdụ kacha mma bụ Signal na Telegram.
1 Signal vs Telegram nke ị ga -ahọrọ? Kedu ihe jikọrọ ha?
1.1 N'ime ngwa abụọ a, kedụ nke kacha mma n'ihe gbasara nzuzo?
1.2 Kedu nke m kwesịrị idobe?
Signal vs Telegram nke ị ga -ahọrọ? Kedu ihe jikọrọ ha?
Ịmalite ime mgbaama na Telegram dị mgbagwoju anya n'ihi na ha abụọ bụ ezigbo nhọrọ, mana ị ga -agba mbọ nweta ihe ha nwekọrọ wee họrọ otu. Iji malite, nnukwu uru bụ na ọ nweghị onye n'ime ha bụ nke Facebook, dị ka a pụrụ isi kwuo ya, maka nnukwu ụlọ ọrụ ọ bụla nwere mmasị na data nkeonwe anyị. N'ezie lee ma nke a ọ dị otu a Ịrịba ama bụ nke ụlọ ọrụ na-anaghị akwụ ụgwọ. Telegram adịghị otu a, ọ bụrụ na ọ bụ nke ụlọ ọrụ na -achọ uru mana ruo taa enweghị asịrị a maara banyere nzuzo, n'ezie nke ahụ bụ ike ya.
Ọwa Telegram 6 kachasị mma nke isiokwu kewara
Ngwa abụọ a nwere ọrụ niile anyị nwere ike ịtụ anya ya, ya bụ, izipu ozi, zipu akwụkwọ mmado, zipu foto, faịlụ, mee oku na vidiyo na ihe niile ị marala. Na mgbakwunye, ha abụọ nwechakwara onwe ha. Ị ga -ejikọ naanị nọmba ekwentị gị na ngwa ka ị nwee ike iji ya ozugbo ebudatara ya na ụlọ ahịa dị iche iche. Kedu ụzọ, ngwa abụọ ahụ dị na Storelọ Ahịa Apple yana na Storelọ Ahịa Google Play, yana maka iPad na mbadamba yana ụdị desktọpụ ha maka Windows, Linux na maka MacOS.
N'ime ngwa abụọ a, kedụ nke kacha mma n'ihe gbasara nzuzo?
Nke a dị nfe, ọ bụ ya mere anyị ga -eji rute ebe ahụ. Ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka nzuzo, na Signal nkwukọrịta ọ bụla ị na-eme na ngwa ahụ ga-abụ nke ezoro ezo na njedebe n'etiti ngwaọrụ mkpanaka ma ọ bụ mbadamba na-eji ngwa ahụ. Yabụ ụlọ ọrụ nwere Signal, ya bụ, Signal Foundation, enweghị ike ịnweta ozi gị ọ bụla ọbụlagodi na m chọrọ. Ọ dị nfe ka Signal ahụ enweghị ike ịma ihe ọ bụla. Ugbu a, anyị na -aga na Telegram.
Na Telegram ọ bụ ihe dị iche na ikekwe ị na -eche na ọ nwụlarị ọgụ mgbe ihe anyị gwara gị gbasara akara. Ọ dịkwa otu a, n'agbanyeghị na ọ na -agbakwụnye ụfọdụ arụmọrụ nke anyị ga -agwa gị ugbu a. Ngwa dị ka nke a Ọ naghị enye gị ozi nzuzo nke Signal nwere, mana ọ na -enye gị ọnọdụ "nkata nzuzo" nke ahụ ga-enye ohere iziga onye ọrụ ọzọ ozi ezoro ezo na njedebe na njedebe n'etiti ngwaọrụ abụọ ahụ ma na-anọghị na igwe ojii Telegram. Nke ahụ bụ, o nwere ntọala mgbaama mana ọ na -emetụta ya naanị ma ọ bụrụ na ịchọrọ wee mepee nkata ọhụrụ na onye ahụ.
Ozi ọ bụla sitere na Ụlọ ọrụ nwe nwere ike ịhụ Telegram n'ihi na ha na -agafe sava igwe ojii ya. Na mgbakwunye na nke a na Telegram ị gaghị ahụ na nhọrọ nke "otu nzuzo" adịghị adị, ị ga -enwe ike ịnwe izo ya ezo n'etiti ngwaọrụ nwere mkparịta ụka n'etiti mmadụ abụọ, ọ bụghị n'otu. Ị chefuola itinye nhọrọ a? Ịchọ ịmata ihe.
Otu otu Telegram si arụ ọrụ yana otu esi eme otu
Ka ị na -eche, na Signal ee, a na -echekwa otu ndị ahụ, yabụ niile mkparịta ụka otu gị ga -abụ ihe nzuzo mgbe niile ụlọ ọrụ Signal Foundation enweghị ike ịgụ ha. N'ezie, buru n'uche na a ga -echekwa ozi ndị ahụ na ekwentị mkpanaka gị yana nke ndị enyi gị, ndị ahịa gị, ezinụlọ gị ma ọ bụ ndị gị na ha na -akparịta ụka.
Ihe ọzọ dị na ihu ọma Signal na agha mgbaama a na Telegram maka nzuzo bụ na mgbaama bụ ngwa mepere emepe, enwere ike ịhụ ma koodu maka ndị ahịa gị yana koodu ha ji sava mgbaama na GitHub. O doro anya na dịka ị na -atụ anya, sọftụwia sava Telegram abụghị isi mmalite, n'agbanyeghị ngwa n'onwe ya. Nke a anaghịkwa agwa anyị ọtụtụ ihe, mana ọ bụ Isi okwu ọzọ na -egosi na Signal na -ebu agha. O yikwara ka ọ na -enweta isi ihe.
Kedu nke m kwesịrị idobe?
Na nkenke, Signal enweghị ọtụtụ nkọwa gbasara ngwa izi ozi nke ngwa abụọ ndị ọzọ dị n'ahịa na -eme, mana ọ bụ na ihe dị iche nke mgbaama gbasara Telegram na WhatsApp bụ nzuzo. Nkọwa ọ bụla nke mgbaama na -aga ebe ahụ na ọ bụ ngwa tụlere ya iji chedo nzuzo anyị. Ọ bụghị na ọ nwere ọtụtụ ọdịiche na Telegram, mana ihe na -emekwa ebe a bụ na Telegram buru ibu ma ọtụtụ mmadụ na -eji ya, yabụ, ị ga -ahụ ezinụlọ, ndị enyi, ma ọ bụ ndị ahịa na -eji Telegram ma ọ bụ WhatsApp na -abụghị naanị akara. .
Usoro kachasị mma iji zoo kọntaktị WhatsApp gị
Ọ bụ ihe onwe onye mana ọ bụrụ na ihe edoro gị anya, ọ bụ na ọ bụrụ na ị na -achọ nzuzo, akara bụ ngwa gị. Mgbe ọ bụrụ na ị na -achọ ihe dị obere, mana karịa WhatsApp, yana ọrụ izizi ozi na ọtụtụ ndị ọrụ, Telegram bụ ngwa gị.
Anyị nwere olile anya na akụkọ a enyerela aka nakwa na site ugbu a gaa n'ihu ị na -edo anya maka onye ga -emeri Signal vs Telegram agha. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla gbasara Telegram ma ọ bụ akara, ị nwere ike hapụ ya na igbe nkọwa. Dịkwa ka anyị na -agwa gị oge niile, hụ gị na edemede Mobile Forum na -esote.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nzukọ Ekwentị » Nhazi ịkparịta ụka n'Ịntanet » telegram » Signal vs Telegram: kedu ihe dị iche?
Templates PowerPoint kacha mma